प्लाज्मा थेरापी गरेका डा. ध्रुव गैरे भन्छन्, ‘कोरोनालाई हल्का लिनु जिन्दगीकै ठूलो भुल हुनेछ’ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ प्लाज्मा थेरापी गरेका डा. ध्रुव गैरे भन्छन्, ‘कोरोनालाई हल्का लिनु जिन्दगीकै ठूलो भुल हुनेछ’
डा. ध्रुव गैरे एशोसियट प्रोफेसर | न्याम्स | जनरल फिजिसियन | वीर अस्पताल बिहीबार, २०७७ भदौ ४ गते, ११:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौं—चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का एशोसियट प्रोफेसर एवं वीर अस्पतालका बरिष्ठ जनरल फिजिसियन डा. ध्रुव गैरे कोभिड—१९ संक्रमणका कारण गम्भीर बिरामी भए । सुरुमा उनलाई खानामा अरुचि, स्वाद थाहा नहुनेजस्ता समस्या देखिए । त्यसपछि डायरिया र बमिट सुरु भयो । १५ दिनअघि साँझ ५ बजेतिर हल्का ज्वरो आएको थियो । त्यतिखेर जाँच गर्दा ज्वरो ९९ डिग्री थियो । एक घण्टापछि चेक गर्दा क्रमसः १०० हुँदैं बढेर भोलिपल्ट विहान पाँच बज्दा १०४ डिग्री पुग्यो ।
ज्वरो एक्कासी बढेपछि डा. गैरेलाई एम्बुलेन्समार्फत वीर अस्पताल ल्याइयो । त्यहाँ रगतलगायतका आवश्यक परीक्षण गरियो । स्वास्थ्यकर्मी भएका कारण लक्षण कोभिड—१९ सँग मिल्दा जुल्दा भएपछि पिसिआर जाँच गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखियो । झण्डै भेन्टिलेटर पुग्नुपर्ने अवस्थाबाट निको हुँदैं डिस्चार्ज हुने तरखरमा रहेका डा. गैरेले हेल्थआवाजसँग कोरोनाले बनाएको स्वास्थ्य जटिलताका बारेमा यसरी सुनाएः
एकै रातमा १०४ डिग्री ज्वरो पुग्यो
म वीर अस्पतालको मेडिसिन विभागको चिकित्सक । नियमित बिरामीको सेवामै खटिरहेको थिए । झण्डै १७—१८ दिनअघि सुरुमा खानामा रुचि कम हुँदैं गयो । स्वाद थाहा नहुने भयो । विस्तारै डायरिया र बमिट सुरु भयो ।
त्यसपछि हनहनी ज्वरो आउन थाल्यो । सुरुमा ९९ डिग्री ज्वरो थियो । भोलिपल्ट विहानसम्म ज्वरो पिकमा पुथ्यो १००, १०२ हुँदै १०४ सम्म पुग्यो । एकै रातमा ज्वरो यसरी पिकमा पुग्यो । विहान ३—४ बजेतिर ज्वरोले लडाउने अवस्था नै आयो । अनि त्यही बेला एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल आए ।
एम्बुलेन्समार्फत वीरमा पुगेपछि रगत परीक्षण गराए । कोभिड—१९ सँग मिल्दाजुल्दा लक्षण भएकाले कोभिड परीक्षण पनि गराए । सबैका रिपोर्टहरु आए । कोभिड—१९ को रिपोर्ट पोजेटिभ देखियो । मलाई आईसीयु चाहिने अवस्थामा भैसकेको थियो । वीरमा छुट्टै आईसीयु नभएका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याइयो ।
शिक्षण आएपछि अवस्था झन नाजुक हुँदैं गयो । आएको तेस्रो दिनमा त अवस्था यस्तो पुग्यो कि चिकित्सकरुले भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्छ भन्ने सल्लाह गर्न थालिसकेका थिए । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले तोकेका उपचारका सबै स्ट्यान्डर्ड अपनाइयो । रेम्डेसिभिर औषधि चलाइयो । प्लाज्मा थेपारी गरियो । भाग्य नै मान्नुपर्छ, चिकित्सकले जे—जे गर्नुपर्ने हो, समयमै गरिएको रहेछ । भेन्टिलेटरमा गैसकेपछि कोभिड—१९ का बिरामी फर्केर आएको बिरलै मात्रै छन् ।
मलाई कोरोना लाग्दैन् भनेर घमण्ड नगर्नुहोस्
चैत्र, बैशाखतिर देखिएको कोभिड—१९ त्यति कडा देखिएको थिएन । अहिले पनि मानिसहरु त्यही सम्झेर कोरोनालाई हेपिरहेका छन् । तर, जसले कोरोनालाई हल्का रुपमा लिन्छ, त्यसले जिन्दगीकै ठूलो भूल गर्छ । हामीजस्तो युवा मान्छेलाई त यसरी सिरियस अवस्थामा पु¥यायो । मलाई अहिलेसम्म केही पनि स्वास्थ्य समस्या थिएन । न सुगर, न प्रेसर न दम नै थियो । मेरो शरीरमा क्यानुला लगाइएको यो पहिलो पटक हो ।
कोरोनाले शरीरमा चाडो—चाडो जटिलता उत्पन्न गर्दै जाँदोरहेछ । घण्टा—घण्टामा समस्या थपिदैं जाने रहेछन् । भेन्टिलेटर र आईसीयु भन्ने कुरा त अडिनरी कुराहरु मात्रै रहेछन् । फोक्सोलाई श्वास फेर्न जति सजिलो बनाउन सक्यो, त्यति रेष्ट मिल्दोरहेछ । मलाई त्रिवि शिक्षणमा अस्पताल भेन्टिलेन्टर राख्नुभन्दा अगाडि राखिने ‘नन इन्भ्यासिभ भेन्टिलेटर’मा उपचार गरियो । यसले अक्सिजनको फ्लो सहज बनाउँछ ।
मेरो शरीरले अक्सिजनले ३० प्रतिशत मात्रै स्याचुरेट गरेको थियो । मलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सबै मापदण्डअनुसार उपचार गरिएपछि अहिले स्वास्थ्यमा सुधार हुँदैं आएको छ । अहिले अक्सिजन स्यासुरेसन गर्ने क्षमता ९२—९३ पुगेको छ । आजै यहाँबाट डिस्चार्ज भएर रेष्टको लागि वीर अस्पताल जाने तयारीमा छु ।
म आम नेपालीलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको भाइरस चैत्र र बैशाखजस्तो छैन् । अहिले किटाणु एकदमै कडा र सक्रिय छ । अबका एक दुई हप्ता कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने अवस्था भयावह हुने निश्चित छ । अहिले अस्पतालका वार्ड र आईसीयुहरु भरिभराउ छन् । एकातिर अस्पतालमा वेडको अभाव हुँदैं गएको छ, अर्कोतर्फ अस्पतालमै राख्नुपर्ने अवस्थाका केसहरु दिनदिनै बढिरहेका छन् । डन्ट टेक इट इजी । तपाईंको जिन्दगी तपाईको आफ्नै हातमा छ । प्लीज, म बलियो छु, मलाई रोग छैन्, मलाई कोरोना लाग्दैन् भनेर घमण्ड नगर्नुहोस् । लाइफ हाम्रो हातमा छैन्, उसको हातमा छ ।
अबका दुई तीन हप्ता एकदमै क्रिटिकल छन् । ज्वरो आएको दुई दिनमै कडा निमोनिया निकाल्नु सामान्य कुरा होइन् । मलाई त्यो बेलाभन्दा अहिले झन डर लागेको छ । किनभने, त्यतिखेर मैले आफ्नो छातीको एक्स—रे हेरेको थिइन् । अहिले आफ्नो एक्स—रे हेरेर आफै डराए । दुई दिनको अन्तरालमा मेरो फोक्सो कस्तो भएछ । म भन्नै सक्दिन् । म केही रोग नलागेको र राम्रो इम्युनिटी पावर भएको मान्छेलाई त यस्तो भएछ । वृद्धवृद्धा, बालबालिका र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नभएका मान्छेलाई मात्रैं यसले गम्भीर बनाउँछ भन्ने जुन भ्रम छ, त्यो आजैदेखि तोडिदिनुहोस् । सबैका लागि उतिनै खतरानाक छ ।
तपाईंहरु सोसल डिस्टान्स बनाउनुहोस्, मास्क लगाउनुहोस् । दुई—तीन हप्ता बाहिर ननिस्कनुस् । दुई हप्ता बाहिर ननिस्केर पहाड र आकाश खस्ने छैन् । भोकै कोही मर्ने पनि होइन् । बाँचेपछि भोलि सबै गरौंला ।